Ungawacwaninga Kanjani AmaHashtag ahamba phambili | Martech Zone
AmaHashtag abelokhu enathi kusukela lapho ukwethulwa kwabo eminyakeni eyi-8 eyedlule ku-Twitter. Esinye sezizathu esenza ukuthi sisungule i I-Shortcode i-plugin ibikukhulisa ukubonakala kwethu ku-Twitter. Isici esiyinhloko salokho kwakuyikhono lokungeza ama-hashtag ngaphakathi kwe-shortcode. Kungani? Kalula nje, abantu abaningi bacwaninga i-Twitter ngokuqhubekayo ngokuya ngama-hashtag abiwe. Njengoba amagama angukhiye ebalulekile ekusesheni, ama-hashtag abalulekile ekuseshweni ezinkundleni zokuxhumana.
Okunye kokuthunyelwe kwethu okuthandwa kakhulu okwethu uhlu lwamathuluzi wokucwaninga we-hashtag iyatholakala kuwebhu. Kepha umthengisi ulisebenzisa kanjani elinye lalawo mathuluzi ukukhomba ama-hashtag amahle kakhulu ukukhulisa ukubonakala kwesibuyekezo sabo semidiya yezenhlalo.
Isizathu esenza ama-hashtag athandwe kakhulu yingoba avumela okuthunyelwe kwakho ukuthi kubonwe yizithameli ezibanzi okungenzeka ukuthi sezivele zingaxhumene nawe. Kubalulekile ukuqonda ukuthi zenziwe njengesevisi, njengendlela yokunciphisa inqubo uma kukhulunywa ngokuthola okuthunyelwe okuningi ngezihloko onentshisekelo kuzo.
UKelsey Jones, iSalesforce Canada
Lesi sibonelo esivela ku-Salesforce sisebenzisa amathuluzi ambalwa.
On I-Tagboard, isincomo ukubuyekeza izibalo, imizwa kanye nama-hashtag ahlobene kuwo wonke amapulatifomu ezokuxhumana. Inhloso yakho kufanele kube ukukhomba okuthandwa kakhulu okuhambisana kakhulu nesihloko sesibuyekezo semidiya yokuxhumana noma i-athikili obhekise kuyo.
On Twitter, ungasebenzisa ukusebenza okubanzi kosesho. Sesha igama ebhokisini lokusesha futhi unamandla okunciphisa imiphumela ngamathebhu amaningi - phezulu (izithombe nama-tweets), bukhoma, ama-akhawunti, izithombe, namavidiyo. Ungahlunga ukusesha ku-Twitter noma ngaphakathi kwenethiwekhi yakho kuphela. Ungakwazi ngisho nokusesha okuzungezile ngokwendawo.
On Instagram, Udinga nje ukuthayipha i-hashtag ne-Instagram izoncoma khona manjalo amathegi athrendayo kanye nokubalwa kwawo kweposi. Faka ama-hashtag afanelekile futhi abe nokubala okuqinile.
Ngenkathi i-Twitter ikhawulela izinhlamvu zakho zizonke ezabiwe kusibuyekezo sakho, kufaka phakathi ama-hashtag, i-Instagram ikuvumela ukuthi wabelane ngama-hashtag afika kwayi-11 esithombeni ngasinye noma kuvidiyo eyabiwe!
Nayi ithiphu yami… be okungahleliwe! Cabanga ngomsebenzisi ocwaninga i-hashtag obhala ngayo kanye namanye ama-akhawunti amaningi wezokuxhumana. Manje, cabanga ngomsebenzisi ocwaninga i-hashtag futhi uthola kaningi okuqukethwe okusha nezibuyekezo ezikhiqizwe nguwe. Yikuphi ocabanga ukuthi kukunikeza ithuba elingcono lokulandelwa, ukwakha ukuqwashisa, ukuzibandakanya ne-akhawunti, noma ekugcineni ukwenza ibhizinisi nayo.
Cabanga ngomsebenzisi ocwaninga i-hashtag obhala ngayo kanye namanye ama-akhawunti amaningi wezokuxhumana. Manje, cabanga ngomsebenzisi ocwaninga i-hashtag futhi uthola kaningi okuqukethwe okusha nezibuyekezo ezikhiqizwe nguwe. Yikuphi ocabanga ukuthi kukunikeza ithuba elingcono lokulandelwa, ukwakha ukuqwashisa, ukuzibandakanya ne-akhawunti, noma ekugcineni ukwenza ibhizinisi nayo.
Tags: ama-hashtag amahle kakhulukhetha ama-hashtagucwaningo lwe-hashtagindlelainstagramkelsey jonesabathengisi canadaithegiTwitter
Dec 21, 2015 ku-7: 06 AM
Siyabonga ngolwazi, uDouglas. Ngingathanda ukungeza isipiliyoni sami ngokusetshenziswa kwe-hashtag.
- Instagram. Badumazekile njengoba abantu bewasebenzisela ogaxekile nokuqukethwe okungafanelekile. Isibonelo i- #sea ingikhombisa izithombe ezi-4 kuphela ezihlobene nolwandle nezinye kwezinye izinto kepha hhayi ulwandle.
- Twitter. Isimo singcono, kepha namanje asisihle neze. Engifuna ukukusho nje ukuthi impahla ye-valusble enama-hashtag afanele kakhulu anikezwa elahlekile ngomsindo. Ngakho-ke ukuze uyihehe udinga ukusebenzisa okunye, njengesithombe esihle noma usho abantu abachazwe
Dec 21, 2015 ngo-12: 55 PM
Iphuzu elihle, u-Alex. Kuyakhathaza impela lapho behlukunyezwa. Mhlawumbe bazokwengeza uhlelo lokubika ngokuzayo lapho abangagaxekile be-hashtag bangabanjwa khona nama-akhawunti abo asuswe.